BBC Somali - Warar - Mudaaharaad ka dhacay Hong Kong
Mudaaharaad ka dhacay Hong Kong
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Novermber, 2012, 12:57 GMT 15:57 SGA
Shirwaynaha xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha
Hong Kong waa meesha keliya ee ciidda Shiinaha ka tirsan ee xorriyadda isu-imaatinka iyo muujinta afkaarta ay dammaanad qaad tahay in lagu dhaqmo.
Toddobaadkan, sharcidejiyeyaasha iyo dadka ololeeya ee ka tirsan isbahaysiga Hong Kong ee taageersan dhaqdhaqaaqa dimoqraaddiga waddaniga ah ee waddanka Shiinaha waxay oogeen muddaharaad bilawgii shirweyanaha 18aad ee xisbiga shuuciga ah.
Kooxdani waxay daabacday liis ay ku qoran yihiin 18 waxyaabood oo ka mid ah waxyaabaha ay dalbanayaan, kuwaasoo ay ku jiraan in la siidaayo ninka haysta billadda nobel ee xiran Liu Xiaobo iyo in la soo afjaro xukunka kelitaliska ah. Guddoomiyaha kooxdan, Richard Tsoi, waxaa uu sheegay inuusan ku qanacsanayn ballanqaadyada hoggaanka sare ee waddanka Shiinaha inay keenayaan isbeddello siyaasadeed.
Waxaan u maleynayaa xukunkii tobankii sano ee la soo dhaafay ee ay hoggaanka u hayeen Hu Jintao iyo Wen Jiabao, inaysan waxba ka qaban wax isbeddel siyaasadeed ah, aysanna oggolaan wax xorriyad hadalka ah oo dheeraad ah ama dimoqraadiyad ah oo dadweynaha Shiinaha loo oggolaaday. Uma maleynayo inuu jiri doono wax horumar dhab ah, gaar ahaan imminka oo Hu Jintao uu xukunka ka degayo.
Muddaharaadku waxaa uu yimid iyadoo muddo sanad ah xiisad sare ay ka dhex oognayd Hong Kong iyo kuwa xukuma dalweynaha Shiinaha.
Dowladda Shiinuhu waxay sheegaysaa in laga yaabo in magaalada Hong Kong ay yeelato xuquuq maqaam caalami ah marka la gaaro sanadka 2017.
Hase ahaatee isbeddel la'aanta siyaasadeed ee waddanka Shiinaha qudheeda waxaa macnaheedu noqonayaa dad badan ayaa su'aal ka qaba daacadnimada ballan qaadka xuquuqda caalamiga ah ee Hong Kong la siinayo. Dareenka xunna waxaa uu u muuqdaa inuu sii soconayo ilaa iyo inta Shiinuhu uu ku dheggan yahay nidaamkiisa xukunka dowladnimo ee kelitaliska ah.